कुलमानलाई कामको चाप: घडीको सुईले रातको १० बजेको संकेत गर्छ, तैपनि उनलाई हतार हुँदैन ! [ हेर्नुहोस उनको बेस्त सेडुल ] – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुलमानलाई कामको चाप: घडीको सुईले रातको १० बजेको संकेत गर्छ, तैपनि उनलाई हतार हुँदैन ! [ हेर्नुहोस उनको बेस्त सेडुल ]
काठमाडौं। कुलमान घिसिङले सारा मुलुक झलमल्ल बनाएका छन् । यसका लागि उनले घामको उज्यालो त्यागेका छन् । अर्थात उनको ज्यानमा घामको न्यानो पर्दैन । किनभने, दिनभर उनी कार्यलय/कार्यक्षेत्रमा खटिएका हुन्छन् । घाम ताप्ने फुर्सद हुँदैन । यही कारण उनको शरीरमा ‘भिटामिन डी’को कमी छ ।
अतः चर्को बिरोध पछि सरकारले लकडाउन खुकोलो बनाउन यस्ता नियम सहित घोषणा गर्दै !